Jiro ho an'ny lakozia
Ny jamba dia fomba maoderina handrakotra ilay efitrano tsy hanevateva ny masony, ary manana fahafahana hanitsy ny halavan'ny fahazavana sy ny fialana. Ny safidin'ny jamban'ny toeram-panasan-damba dia manamarina ny fahaizany sy ny fahaiza-manaony, satria misy fepetra manokana ao an-dakozia noho ny tsy fahampian'ny mikroklima.
Iza no jamba mifidy ny lakozia?
Ny farim-piainan'izy ireo dia tena lehibe. Voalohany aloha, mila manapa-kevitra ianao raha tianao ny jirikina amin'ny sehatra na horizontaly. Ary samy manana toerana izy ireo mba ho ao an-dakozia, ary ny safidy eo anelanelan'izy ireo dia vita taorian'ny fanombanana sy ny lanjan'ny lozisialy rehetra.
Ny jaky horizontaly ho an'ny lakozia no endrika tena mahazatra, miaraka amin'ny tetezana manify izay afaka misokatra sy manakaiky, ary koa mitsangatsangana sy mianjera / midina.
Ny jiro ho an'ny lakozia dia azo avy amin'ny fitaovana isan-karazany - Aluminium, plastika, hazo, bamboo. Ary amin'ity safidy ity dia ny tombony lehibe indrindra. Ankoatra izany, dia ireo jirikety marika izay mamonjy ny toerana amin'ny alàlan'ny fametrahana mivantana amin'ny fehikibo eo amin'ny varavarankely.
Amin'ireo minisitra - loko matevina sy mora ampiasaina. Matetika ny ravin-damina dia mamotika, mihorakoraka ary mandre feo mandritra ny drafitra.
Ny jirikopoditra ho an'ny lakozia dia mitovy kokoa amin'ny rindrina nentim-paharazana, satria ny lamba lavalava na ny fantsom-biriky no mihantona avy any ambony. Misokatra amin'ny lafiny iray na avy amin'ny foibe miaraka amin'ny torolàlana roa miaraka izy ireo.
Ny tombony ho an'ny jiro toy ny lakozia dia ny endrika tsara tarehy sy ny "trano" ny lamba lamamoe, safidy lehibe amin'ny endrika, ny fahafahana mandidy jery maro be ho an'ny lakozia amin'ny endriny sy ny fitarihana. Ilaina koa ny manamarika ny tanjaka, ny fampiharana ary ny faharetan'ny modely. Mora amin'ny fitantanana izy ireo, fa tsy miparitaka, saika maloto ary tsy mandoro.
Ny fitaovana hafa amin'ny jiram-borona nentim-paharazana dia ny fanakam-baravarankely ho an'ny lakozia Mety ho toy izany koa izy ireo any amin'ny faritra manerana ny faritra manontolo na amin'ny endrika "zebra".
Ny jiro antsoina hoe jiro mandritra ny alina amin'ny lakozia dia karazana jirom-borona izay tsy vitan'ny hoe ambany sy mampiakatra azy ireo, fa koa ny mamaritra ny famaritana ny hazavan'ny masoandro noho ny fisian'ireo andian-tsoratra roa samihafa ao amin'ny lamba. Rehefa mijery horonan-tsary toy ny jiro ianao, dia mety hahatratra ny fifandrifian-java-manelanelana ny hazavana sy ny haizina.
Zoro kelin'ny ankizy miaraka am-pandriana
Toeram-pandehanana misy balkonina
Ny jaky horita amin'ny varavarankely plastika
Vato amidy eny amoron-dàlana
Ny endriky ny gazetiboky - ahoana no ahafahana miditra ao amin'ny tontolon'ny tranonkala malaza amin'ny teny arabo?
Bed of particule by-tanana
Mihoatra ny plastika misy plastika misy plastika?
Plastika fitaratra amin'ny solika
Ambonin'ny famitana balkonina?
Kitapo miloko fanorenana anatiny
Takelaka latabatra ho an'ny solosaina finday
Kitapo any Skandinavie
Kabinetra amin'ny fomba anglisy
Hawthorn - fepetra henjana
Naneho zazalahy 5 volana i Anne Hathaway
Resa-tany ao Laos
Karazam-bozaka sela misy hoditra
Sarom-behivavy marefo amin'ny gorodona
Sakafo mangatsiaka amin'ny fahavaratra - resipe
Kalanchoe Blossfeld - fikarakarana tokantrano
9 tranga rehefa olona voavonjy i Google
Sary nalaina tamin'ny fararano 2017 - inona no tokony hatao mandritra ny vanim-potoana vaovao?
Biseptol ho an'ny ankizy
Michelle Obama dia lasa ny endriky ny Vogue tamin'ny volana Desambra
Ny akanjon'i Milena
Fampakaram-bady fampakaram-bady - lamaody sy fironana lamaody
Tapakila amin'ny fomba fanolorana an'i Provence
Ahoana ny fomba hanamboarana hena?
Sakamandimby marinated - tsara sy ratsy